Kuhle CIA Isifundo Izinto
Ukukhetha ilungelo CIA izinto cwaningo iyona eyodwa ebaluleke kakhulu isinqumo uyokwenza endleleni yakho maqondana abe uMcwaningi Mabhuku Certified Yangaphakathi.
Uzokwaziswa nokuchitha amahora amaningi etadisha nalo, ngakho kubalulekile ukuthola lowo esifanelana kangcono yakho isitayela yokufunda.
Ngakho nanku izindaba ezinhle - Ngizibonele ihlolwe futhi demoed ethandwa kakhulu inthanethi CIA Ukubuyekeza izifundo emakethe ukuze akudingeki! Ishadi lokuqhathanisa elingezansi kuzokusiza ukuthola ukuthi yimuphi kufanelana omunye nezidingo zakho.
Ukudalula: Sicela uqaphele ukuthi ezinye izixhumanisi ngezansi kukhona lobulungu links, futhi ngaphandle kwezindleko ezingeziwe kuwe, Ngizokwenza uhola imali yokudluliselwa uma unquma ukutshala Yiqiniso ezibalwe ngezansi. Sicela usebenzise kuphela izixhumanisi yami uma unomuzwa wokuthi ngakuhlangulisa enkambweni yakho isinqumo ukubuyekeza.
Gryfina CIA ukubuyekeza Course
Wiley CIA Isifundo Izinto
Amandla Resources CIA ukubuyekeza Course
Inkampani Gryfina CIA ukubuyekeza Exam Matrix CIA Review Wiley CIA Excel ukuhlolwa Amandla Resources CIA HOCK international CIA
usezingeni #1 #2 #3 #4 #5
Inani $427 $499 $375 $495 $814
Isivivinyo samahhala Akekho Demo Free 48 Amahora 20 izinsuku amasampula Mahhala
Imibuzo Practice 2,000+ 2,000+ 5300+ 3700+ 2,919
Ukufinyelela 12 izinyanga 18 izinyanga 12 izinyanga 18 izinyanga Unlimited
Insizakalo yekhasimende imeyili Ucingo, imeyili, Chat imeyili ithimba losekelo ukwesekwa Tech
Best Value Best Technology Isifundo Umhlahlandlela futhi ugxile amanothi setha Ngaphezu kwe 2800 e-emakhadigama laphatselene, ebhukwinitifundvo futhi ukuhlolwa mbumbulu Imiqophi, e-flash card, incwadi
Qalisa QALA MANJE QALA MANJE QALA MANJE QALA MANJE QALA MANJE
Top CIA Isifundo Izinto zibalwa
Eguquguqukayo Learning Software
smart isofthiwe Gryfin sika kuzodala isimiso sesifundo somuntu ethize izidingo zakho. Ngu ekuhloleni izimpendulo zakho, Gryfin ungazakhela uhlelo ngezifiso ogxile izindawo zakho lobuthakathaka. Injongo iwukubonisa lula inqubo ukutadisha ukuze kuphela ukukhomba izindawo obuthaka ezidinga ukulungiswa okwengeziwe.
Esikhundleni umuntu-usayizi-isifuthefuthe-zonke indlela, Gryfin CIA ukubuyekeza ehlanganisa inkambo yakho nendlela yokufunda. Lokhu Imiphumela sokukhomba ngendlela esebenza kahle kakhulu ukufunda. Isofthiwe oluhambelana ukulungisa kude ulwazi ezingadingekile kanye nomsebenzi eziphindaphindekayo ngakho musa ukuchitha noma nini uya phezu impahla usuvele balufunda.
ukuzethemba Gryfin ku isofthiwe yayo yokufunda oluhambelana kubonakala pass noma imbuyiselo inqubomgomo. Uma usebenzisa busebenze yaphelela futhi ungadluli, inkampani ngeke ukubuyisa imali imali yakho. Nokho lokhu kukhetha kuncike ezinye imigomo nemibandela.
Akukhona nje ukuthi usinikeze Gryfin CIA ukubuyekeza anikele Pass noma yokubuyiselwa kwemali Isiqinisekiso, kodwa futhi inikeza 50% Isaphulelo uma unquma thatha futhi bamba futhi inkambo ngemva kokuba siphelelwe yisikhathi.
Easy-to-Yokusebenzisa Course Design
sewebhu Kulula ukusebenzisa Umklamo Gryfin kwenza kube iyashelela test ukulungiselela. Ideshibhodi kusiza ukwenza yonke indawo kufinyeleleke futhi siqondisa ngenqubo njengoba it uqaphe intuthuko yakho. I ngezifiso inqubo ukutadisha zenzelwe umfundi ngamunye enze lokhu Yiqiniso ihehe tinhlobo letehlukene test abanazo. Njalo kwesifundo sethu kuzosiza ngezifiso Yiqiniso, okwenza kube lula ngawe ukuba usebenzise.
Usuku ukuhlolwa Planner
Leli yithuluzi elikhulu elisetshenziswa Gryfin ukuthi sinquma ukuthi mangaki amahora kudingeka utadishe ukuze bamboze zonke izinto futhi umkhuba ngaphambi ukuhlolwa yakho usuku. Odinga ukukwenza nje okokufaka usuku ukuhlolwa yakho futhi yini izinsuku ungakwazi ukufunda, bese Gryfin kuzodala ukulungiselela amasu esakho.
Uzobona uhlelo eningiliziwe mangaki amahora ngosuku uzodinga ukufunda ukuze balungele CIA ukuhlolwa. Lokhu kuzokusiza ukuthi bagweme egcizelela mayelana Logistics wokuqonda ukuthi uya enyuka isikhathi sakho cwaningo. Ikhanda kancane ngcono uma kuziwa ukulungiselela ukuhlolwa kwakho!
Gryfin kuyinto ezingabizi kakhulu esibanzi Ukubuyekeza Yiqiniso etholakalayo. Intengo ongaphakeme kuyoba kukho ekhangayo ngawe, kusukela Ukubuyekeza nezinye izifundo nge izici ezifanayo kungaba ezingaphezu kuka kabili intengo Gryfin.
Ukwenza Izinto Zibe Lula
Gryfin wenze ukuncishiselwa ahlanzekile design web okhipha iziphazamiso nezinye izincwadi ezivamile ezazilethwa akuyona kuzibophezelo ufundela CIA ukuhlolwa. Ideshibhodi ilula futhi yonke indawo ukhululekile imfuhlumfuhlu ukuvumela ukuba ugcine umgomo wakho lokho kubaluleke kakhulu: edlulisa CIA ukuhlolwa. Kunezinye izibonisi eziningana ukuthi iyabonakala eyethulwe kuwe-ke Kulula ireferensi yimiphi izinhlelo kuhlanganisiwe namathuluzi ngenkathi ngitadisha. Ngaphandle zonke izinsimbi kanye kuzwakala, ungakwazi ukugxila ngempela intuthuko yakho futhi ubone lapho uzodinga ukuthuthukisa.
Gryfin inikeza ezihlukahlukene izaphulelo. Okwamanje, ke Unikela 12% Isaphulelo ngoba okokuqala ukuthenga.
No Izinkulumo Isiqophi
Gryfin CIA Review is provided through a web based solution and it does not provides video leactures. Njengoba inkampani okholwa yokufunda oluhambelana, Gryfin inikeza wena impahla, ihlola ulwazi lwakho on impahla wathi, bese likuqondisa emuva izihloko kudingeka umsebenzi owengeziwe.
Gryfin CIA ukubuyekeza ngumuntu okwaziyo kakhulu abafundi self-eyashukumisela ngubani uyosebenzisa isofthiwe oluhambelana yokufunda yokwandisa izifundo zabo. Nokho-ke inikeza value xaxa izinhlobo eziningi labantu ngokusekelwe oluhambelana yayo yokufunda isitayela.
Gryfin is kuyanda phakathi CIA test abanazo ngenxa ivumelana nezimo futhi isixazululo ezihlakaniphile web esekelwe yokufunda. ngokwezifiso Its smart okusekelwe izindawo zakho ababuthakathaka kanye nendlela yokufunda nayo okwenza kube ukukhetha ethandwa. izici ezithuthukisiwe izinyanda nge eziphansi senza kube ngempumelelo nakahle CIA test ukubuyekezwa.
Kudlula noma Ukubuyiswa Isiqinisekiso
Exam Matrix has a phenomenal published 80% kudlule izinga! It’s clear their confidence in the course content continues with their pass or refund policy. Uma usebenzisa busebenze yaphelela futhi ungadluli, inkampani ngeke ukubuyisa imali imali yakho. Nokho lokhu kukhetha kuncike ezinye imigomo nemibandela. Please see their website for the full details.
Much like Gryfin’s software, Exam Matrix provides an Exam Day Planner that calculates how many hours you need to study in order to cover all the material. It then determines what you need to practice before your exam date. Odinga ukukwenza nje okokufaka usuku ukuhlolwa yakho futhi yini izinsuku ungakwazi ukufunda, and then Exam Matrix will create your personalized preparation strategy.
Exam Matrix offers a variety of discounts. Okwamanje, ke Unikela 15% Isaphulelo ngoba okokuqala ukuthenga.
Exam Matrix CIA Review is provided through a web based solution and it does not provides video lectures. Njengoba inkampani okholwa yokufunda oluhambelana, Exam Matrix provides you with material, ihlola ulwazi lwakho on impahla wathi, bese likuqondisa emuva izihloko kudingeka umsebenzi owengeziwe.
Exam Matrix CIA Review is a great fit for self-motivated learners who will take advantage of the adaptive learning software to optimize their studies. Nokho-ke inikeza value xaxa izinhlobo eziningi labantu ngokusekelwe oluhambelana yayo yokufunda isitayela.
Wiley ubelokhu ebhizinisini ukuhlolwa PrEP isikhathi esingaphezu 40 iminyaka futhi ngokudala eliphezulu Ukubuyekeza izifundo eziningana ezahlukene ezimali izivivinyo eyaziwa. Wiley CIAexcel, owaziwa nangokuthi Wiley CIA ukubuyekeza, uhlala kuze kube lezi zilinganiso futhi inikeza ezihlukahlukene izinsiza ukusiza ukhetho ukufundela futhi sidlule CIA ukuhlolwa.
Ukuthatha umkhuba izivivinyo kuyingxenye ebalulekile yokulungiselela CIA ukuhlolwa. Wiley CIA ukunika inketho yokudala angenamkhawulo, ngezifiso umkhuba izivivinyo, kanye nokusebenza analytics kusuka ocebile test asebhange we kuka 5300 imibuzo. Iphinde ivumele ukuze uhlole intuthuko yakho kanye nokusebenza. I ulingisa isofthiwe langempela Pearson Vue test ukuze alungiselele abafundi sokuqala. CIA ukuhlolwa.
Namuhla ukufunda into etholakala ku-smart phone is kuyanda. Wiley idale zokusebenza kokubili iPhone and iPad. Ungakha inothi amakhadi ichashazi amaphuzu imiqondo esemqoka, isibekisombhalo imigomo ethize noma izigaba, search ngamagama abalulekile, futhi udale amaphuzu akho siqu zonke izingxenye ezintathu e-CIA ukuhlolwa. Le ndlela iphumelela kakhulu ukufunda ekuhambeni.
Wiley sika CIA izincwadi olusha ngonyaka. Inkambo ephelele kuhlanganisa iqoqo 3 emabhukutifundvo, elinye libe yingxenye CIA ukuhlolwa ngamunye. Unenketho ukuthenga ibhuku elilodwa noma zonke zontathu ngentengo ehlisiwe. Lezi zincwadi ezintathu zisebenza kanye ukusiza baqinise izihloko ukukusiza balukhulume imiqondo kanye nezimiso. Incwadi ngayinye ligcwele imidvwebo, amathebula, amashadi kanye namadivayisi inkumbulo ukukusiza ukukhumbula izinto. Wena ubuye ukufinyelela imibuzo choice multiple nezisombululo zabo.
Lokhu zokwenezela inkomba isethi ucacisa kahle indaba efundwayo ezibaluleke kakhulu embozwe ukuhlolwa ngefomu olujiyile. Wiley Focus Amanothi ziza Kuvunguza eboshiwe flip Umhlahlandlela futhi ugxile imiqondo esemqoka ukukusiza wenze okungcono kakhulu isikhathi sakho cwaningo. Uzoba ukuqeda sokuzivivinya ku izibalo zezimali, amakhono spreadsheet ucwaningo.
Ingxenye ngayinye ufundisa amasu amasha nendlela yokulungiselela ukuhlolwa yakho masinya futhi inikeza eyengeziwe zinto eziyisethenjwa ezindaweni zakho buthaka.
Isivivinyo samahhala NgesiKhathi SokuLingwa Bank
Ungakwazi ubhalisele ukuthola 48 amahora khulula, ukufinyelela okungenamkhawulo Test Bank. Nakuba ungeke ukwazi ukufinyelela izinto Yiqiniso ebhukwinitifundvo nobe nezinye izinsiza, uzokwazi ukuba unqume ukuthi ukuthenga Test Bank eceleni noma njengengxenye inkambo yakho.
Alukho uhlelo lokusebenza kubasebenzisi Android
Wiley sika CIA ukuhlolwa Focus Amanothi itholakala kuphela Apple iOS kumadivayisi hhayi Android esekelwe amafoni smart. Singaba nethemba uwabone ku-Google Play uma funa inyuka.
Wiley CIA ukuhlolwa ukubuyekeza esokuba inkambo inthanethi ngaphandle izingxenye bukhoma noma ividiyo. Abafundi Kuyomelwe bamboze kwento izincwadi bese uqedela imibuzo umkhuba bebodwa futhi ancike izimpendulo ukuthi anikezwa ukucacisa izinkinga noma imibuzo ongase ube nayo.
Wiley CIA uyozuza abafundi inthanethi bayathanda ukuzijayeza imibuzo amaningi ngangokunokwenzeka futhi uhlela indlela abaphila edlulisa ukuhlolwa ngokohlelo zabo isifundo. Wiley zibuye laziwa kahle imibuzo ephezulu afana labo ukuhlolwa futhi kungenziwa elicwengekileyo for zokuprakthiza ezihilela Test Bank. Yizincwadi afakiwe futhi Focus Amanothi Uyi kwalokho yokwamukelwa kwabafundi abangaphezu bendabuko abafuna ukusebenza indlela yabo ngokusebenzisa umbhalo.
Ukuba ukufinyelela zokusebenza zeselula iOS unikeza abafundi ithuba lokuyofunda kunini, kuphi nganoma kanjalo kubeka isimo sabo. Lena esibalulekile ukhetho nge kokuhamba isikhathi eside futhi ungagcina isikhathi eside.
Amandla Resources Corporation (PRC) luyisifundo Ukugunda eqondile kuze kube seqophelweni ezidlulisela CIA ukuhlolwa.
Database enkulu Imibuzo Practice
Olubanzi zokuprakthiza kubalulekile ezidlulisela CIA ukuhlolwa. PRC inikeza wena ezingaphezu kuka 3,700 imibuzo. Imibuzo asethwe ukuze ukwazi ukuqondisa izihloko ethize wena uhlushwa.
Wena nje kuphela umkhuba imibuzo elanele, kodwa futhi bheka izincazelo eningiliziwe kungani impendulo ngayinye noma unembile noma azilungile. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba imiqondo isakhiwo. PRC nakanjani has Ukuzivumelanisa nezimo xaxa uma kuziwa umkhuba yayo imibuzo kuqhathaniswa nezinye izifundo. Uzokwazi bangibhalele abuye atakhele entsha ngezifiso test amaseshini.
PRC unethemba kakhulu ukubukeza Yiqiniso. Ngakho kangangokuba unikeza leso siqinisekiso pass. Uma ngempela ukusebenza umncintiswano, ungadluli, PRC ngeke ukubuyisa imali imali yakho. Kumele uhlangabezane nezimfuneko zalo (ezifana beshaya ezingaphezu kuka 90% phezu kwakha mbumbulu), ukuze bathole kwemali kwe- hhayi odlulayo.
Ngokungafani nezinye CIA Ukubuyekeza izifundo, PRC kukunika inketho ukucela imali okugcwele ngemva 30 izinsuku, akukho imibuzo ebuzwa! Uma ubona ukuthi le nkambo ayifani yokufunda yakho isitayela, uzokwazi ukuthola imali yakho emuva futhi uthole inkambo Kuzoba ngumdlalo kangcono.
Hlanza Course Ifomethi
Umklamo elula yalesi Yiqiniso kwenza navigation lula. Sinikeza indlela ephumelelayo isifundo kungekho distrations. Njengoba uphila ngokusebenzisa Yiqiniso, uzobona ukuthi ebhukwinitifundvo sehlukaniswe zokutadisha ukulawuleka ukuthi silingise IIA sika ukuhlolwa uhlaka. Ifomethi isebenza ukuze kubukezwe lokho obekufundwa ngenkathi lula okulungiselele ukuhlolwa, sibonga amathiphu cwaningo uchwepheshe namathiphu Ukudlula enikeziwe kuyo yonke Yiqiniso. Ekupheleni esifundweni ngasinye, uzokwazi ukuhlola izinga ukuqonda nge imibuzo ambalwa umkhuba izibonelo ochazayo letingekhatsi etheksthini.
Ngemva usuqedile ukufunda ukwaziswa, senta tonkhe leto imibuzo choice multiple, wahlola ne-e-emakhadigama laphatselene, une izivivinyo amabili mbumbulu ukuthatha ukubona kahle ndlela ozokwenza ngayo ukuhlolwa langempela. Lezi izivivinyo mbumbulu babe kusakhiwo efanayo nokusebenza njengoba CIA test yokuqala ukuze ukwazi ukuzizwa yangempela kwemvelo yokuhlola. Iphinde iyasiza ukuhlola ulwazi lwakho ngaphansi kwengcindezi phakathi ephelele yokuhlola isikhathi.
Njengoba omunye ongakhetha ethengekayo CIA ukuhlolwa Ukubuyekeza izifundo, PRC ukuthenga izindleko kuphela $396. Uthola zonke izici nezinye izifundo zinezigaba kodwa ngokuba ingxenye yezindleko. Kukhona ukhetho ukuthenga izingxenye ngokuhlukile $175 ngamunye.
Ukutadisha ngoba CIA kuwuhambo solo, yingakho PRC has abafundisi ngawe ukuxhumana ngakho akudingeki ukuba wenze lokhu kuphela. Lezi ochwepheshe umkhakha bazokwazi ukukusiza imibuzo yakho ethile bese ujulise ukuqonda kwakho.
PRC CIA ukubuyekeza alinikezi video izinkulumo semfundvo. izifundo umbhalo kuphela ziyatholakala okulungiselele. Labo bafundi abakuthola video izinkulumo yinhle uyowuthola ulahlekile kule nkambo.
PRC iyona Gap ngalabo abafuna ukutadisha bebodwa. bafundzi Self-eyashukumisela ziyozuza kule nkambo okwengeziwe. Le course yakhelwe zokuprakthiza olubanzi.
Ngemali ephansi Amandla Resource kunikeza impahla olunzulu ukuze abafundi ohamba ngendlela oyifunayo kumgomo. I kahle emklamweni iphuzu kule nkambo ivumela impumelelo ngempumelelo CIA test. I isiqinisekiso pass zaleli Yiqiniso Kubalulekile test abanazo eyashukumisela.
Hock International CIA ukubuyekeza Course
Hock International CIA ukubuyekeza linikeza ongakhetha Yiqiniso eziningana abafundi ukulungiselela CIA ukuhlolwa. izincwadi zabo ukumboza izisekelo ngolimi kuqondile, okwenza lokhu okuhle Yiqiniso kulabo abadinga ukubuyekeza olunzulu kusuka phansi.
Hock CIA ukubuyekeza inikeza amasampuli amahhala Downloadable we izincwadi, Emafleshikhadi, the ExamSuccess imibuzo multiple choice, namavidiyo ukuze ukwazi hlola Yiqiniso ngaphambi kokukuthenga ke. Lena ukumaketha umzamo omuhle kakhulu futhi Akudingi imininingwane siqu. Umqondo uwukuthi futhi ehlukile kulokho ezinye CIA Ukubuyekezwa offereing.
Abafundi bangathatha mahhala CIA kwakha kanye nethuba ukuncintisana namanye abafundi ufundela CIA ukuhlolwa ukuzama futhi uthole amagama abo ungene omunye wabaphambili Hock sika. Qaphela ukuthi kwakha amahhala, kodwa kufanele ukubhalisela i-akhawunti mahhala ukubamba iqhaza, nokuthi lesi sihloko esisha kusenziwa ihlolwe (inguqulo ye-beta).
ExamSuccess Software / CIA Umbuzo Bank
ExamSuccess Isifundo Software Hock sika likhona CIA Imibuzo ingxenye Yiqiniso. Isofthiwe kuhlanganisa izinkulungwane imibuzo choice multiple nezincazelo kokubili izimpendulo ezamukelekile engalungile. Imibuzo siyigubhe ngesikhathi sifundo futhi kungenziwa egcizelele ngesihloko, ukuze ukwazi ukugxila nesifundo sakho sisekelwe isihloko okukhethayo. Eningiliziwe Ukubuyekeza ukusebenza ubonisa izinga lakho nakunoma esekelwe ingxenye impahla ngayinye.
Ibhange umbuzo lungatholakala ku-intanethi noma ukulandwa ukusetshenziswa ngaphandle uxhumano lwe-inthanethi. Phawula okwakuhlanganisa ukuhlolwa mbumbulu iqukethe imibuzo emisha ezingenziwanga sisetshenzisiwe kwenye indawo izinto cwaningo, ukuze ukwazi gauge ukulungela yakho ukuze ukuhlolwa langempela ku isethi fresh imibuzo.
International Course Izinketho
Hock inikeza izifundo eziningana bukhoma futhi inikeza izinto zalo cwaningo kwamanye amaqembu e eziningi izindawo emhlabeni wonke. Abafundi International noma expats ufundela CIA ukuhlolwa phesheya kungaba ubhalisele inkambo Hock bukhoma e naseBelorussia, Russia, Ukraine, naseKazakhstan, nakwezinye izindawo eziningi ube Ukubuyekeza izifundo ezihlanganisa izinto cwaningo Hock. Izinto ziyatholakala futhi ngesiRashiya bese Arabic. Sicela ubone website Hock ngemininingwane.
Emakhadi awumthombo omuhle kakhulu yokukhumbula imiqondo ehlukene kanye tutorials. I emakhadigama laphatselene interactive ezakhiwa ukukusiza ufunde ulwazi njengoba kahle ngangokunokwenzeka. amakhadi amasha avele kancane kancane futhi emakhadigama laphatselene ethulwa kuye ulwazi lwakho noma ubuchwepheshe nobe esifundvweni lesitsite.
Enye inzuzo yokuhlinza Ukubuyekeza izifundo Hock sika wukuthi izinto angasetshenziswa nje abafundi bayayidinga ukufunda. Lokhu kuyinzuzo enkulu njengoba ukuqhathanisa nezinye CIA izibuyekezo ziyatholakala unyaka owodwa kuphela.
Hock ukunikeza video tutorials ngemali eyengeziwe. Lona inzuzo enkulu kutsi bafundzi labahlangabetana ukuthandwa tutorials ezibukwayo ngempumelelo.
Imibuzo Small Database
Hock sika umbuzo yasebhange ihlanganisa okungaphezu 2,800 imibuzo, okuyinto kakhulu ngendlela uqhathanise nezinye nesincintisana. Eminye yemibuzo futhi kubonakale efanayo kakhulu futhi ngaleyo ndlela ubheke eziphindaphindekayo. Ngakho yokuntuleka ukwehluka kuyinto enkulu inkinga noWoth Hock CIA ukubuyekeza.
Ayikho Isiqinisekiso Imali Emuva
Ngokungafani nezinye CIA libuyekeza Hock alinikezi sokubuyiselwa imali. Lesi sici Nokho silinganise yi amasampuli amahhala ukuthi ahlinzeke.
Hock unawo isiqinisekiso pass uma uthenga Iphakheji yabo Qedela. Uma ungadluli CIA ukuhlolwa, bakhokhe imali yakho ukuhlolwa kabusha ukuthatha ukuhlolwa uma bahlangabezane nezidingo zabo (kodwa namanje akukho imbuyiselo). Sicela uxhumane iwebhusayithi Hock sika ngemininingwane kanye nezidingo.
Nakuba Hock CIA ukubukeza inketho okungabizi, zikhona izinhlelo kangcono laphaya imali kuphela kancane ngaphezulu. Ikhwalithi imibuzo kanye nobungako liphansi. Nokho tutorials isiqophi kukhona usizo olukhulu ukuze abanye abafundi. Qedela iphakethe okwamanje kwi izindleko $649 esikhundleni se $814.
CIA Learning System ukubuyekeza
CIA Learning System yilona olusemthethweni efundwayo ithuthukiswe yi-Institute of Internal mabhuku (IIA). CIA Learning System enkambweni yokuziphilela lesifundvwako IIA kuhlanganisa kunyatheliswe futhi e-book ukufundwa izinto, interactive impahla inthanethi, futhi ukukhetha bukhoma, izifundo ofundisa-led. Le kit umnyuziki ihlanganisa zonke izingxenye ezintathu ukuhlolwa, noma ungakwazi ukuthenga izinto ngoba ingxenye ngayinye ngokwehlukana.
The self-cwaningo Yiqiniso yakhelwe etholakalayo iminyaka emibili unikeze Ukuzivumelanisa nezimo ngokwanele esazo zonke umfundi. Ngemva kokuthenga ukufinyelela ukuhlolwa kanye Yiqiniso impahla iyatholakala amabili njengoba uqhathanise unyaka owodwa kusukela nezinye nesincintisana.
Online Amathuluzi Isifundo
Interactive amathuluzi intanethi ezenza kube lula ukwakha uhlelo cwaningo olwenziwe ngokwezifiso ngokususelwa ku ukusebenza kwakho ku practice imibuzo ukuhlolwa. Ungakwazi ukuthatha zokuxilonga ngaphambi kokuhlolwa ukunquma izimfanelo zakho nobuthakathaka bese usebenzisa isici SmartStudy ukuba kusakhiwo uhlelo lwakho cwaningo. Kwakha ulandele isahluko ngasinye, nangemuva ukuhlolwa ukuba ubone indlela ulwazi kungakanani isakhuluma uma uke embozwe yonke impahla. izincwadi ezinhlanu ukumboza konke odinga ukukwazi ukuze zonke izingxenye zawo ezintathu ukuhlolwa.
Ngokuqondene nabafundi abangaphumeleli bakhetha a bendabuko more ekilasini isitayela imfundiso ezifundiswa uthisha, izingqungquthela inthanethi ahlinzekwa izindawo eziningi. Eziningi zalezi izifundo futhi zihlanganisa ukufinyelela zonke cwaningo izinto inthanethi futhi.
CIA ohlelweni lokufunda ihlinzeka demo khulula komsebenzi wakhe. Nokho demo lilinganiselwe. Ukhetho abafuna ukufinyelela demo kufanele ugcwalise inhlolovo emfushane ukufinyelela.
Ayikho Learning eguquguqukayo
Nakuba ungathola impendulo ku intuthuko yakho, lena akuyona letinte kumfundzi nenchubo letinte oluhambelana isitayela Yiqiniso: imibuzo eyethulwa ukuhlola ukungakhethi kungukuthi ngentando yakho ngesisekelo wakhe / ubuthakathaka bakhe noma izimfanelo. Lokhu kungolunye uhlobo ongahluziwe kakhulu umbuzo yasebhange ezingesiyo oluhambelana.
CIA Learning System ingenye izifundo eqolo emakethe. Umkhawulo izici ezingekho oluhambelana kubukeke eqolo njengoba uqhathanise izimbangi.
Ayikho Tutorials Isiqophi
Le course sakhiwe ulwazi izincwadi, umkhuba imibuzo, futhi umkhuba izivivinyo kuphela. Azikho okokufundisa vidiyo itholakale nge kulesi sifundo.
Nakuba izinto ebhukwinitifundvo ayindlela ukulungiselela ukuhlolwa, amathuluzi emoyeni kancane umxhwele ukudlula lezo ezinikelwa ngabaningi encintisana IIA sika. Isici kuyaduduza kakhulu e-CIA Learning System ukuthi kwadalwa Institute of Internal mabhuku (IIA), ngakho abafundi angaqiniseka ukuthi into ezikufundayo yilokhu liyombozwa ukuhlolwa.
Nokho yimvelo kancane oluphelele ngezindleko okusezingeni eliphezulu kwenza ekahle CIA ukulungiselela. Le ndlela yokwenza kokudala esetshenziswa kwenza ezikhangayo abanazo test entsha.
Crush The Ulwazi Sec Izivivinyo
Imininingwane & Info
CISA Izifundo & Certification
Kuhle CAPM sokuzilungiselela Course & Isifundo Izinto
Kuhle PMI-ACP sokuzilungiselela Course & Isifundo Izinto
Kuhle PMP sokuzilungiselela Course & Isifundo Izinto
© Imininingwane - Crush The InfoSec Izivivinyo - Enfold Theme by Kriesi
CISA Salary: Ungakanani Can You Hola?
CISA vs CISSP vs CIA vs CISM Career Ukuqhathanisa